Fikarakarana ny fifidianana : Maro ireo kandida tsy matoky ny CENI -
AccueilSongandinaFikarakarana ny fifidianana : Maro ireo kandida tsy matoky ny CENI
Fikarakarana ny fifidianana : Maro ireo kandida tsy matoky ny CENI
05/07/2018 admintriatra Songandina 0
Voatsikera mafy ny vaomieram-pirenena mahaleo tena mikarakara ny fifidianana (CENI ) tamin’ny fihetsika nataon’ny kandida Andry Rajoelina, izay toa manao fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana sahady efa ho herinandro maromaro izao. Toa nitazam-potsiny ny zava-nisy mantsy ireto mpikarakara ny fifidianana ireto nanoloana izay noheverin’ny maro fa fandikan-dalàna nataon’ny Mapar izay. Tranga izay nahatonga ny maro nametra-panontaniana ny amin’ny tena fahaleovantenan’ity andrim-panjakana ity tokoa. Anisan’ireo kandida efa nanankinan’ny maro ny CENI ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, izay nilaza fa tsy tena mipetraka marina ny fahaleovantenan’ity sehatra mpikarakara ny fifidianana ity, ka tokony hojerena manokana aloha izany vao hirosoana ny fifidianana.
Efa niezaka ny nitondra fanazavana ihany ny filoha lefitry ny CENI momba izao fihetsika nataon’i Andry Rajoelina izao, ny amin’ny hoe “tsy misy lalàna mazava mamaritra ny fampahafantarana ny vinam-piarahamonina ataon’ny kandida eto amintsika ka samy manao izay heveriny amin’ny fomba hanatanterahiny izany ny rehetra. Mazava tsara kosa izany amin’ny fotoan’ny fampielezan-kevitra” raha ny fanazavany. Fanazavana izay toa tara ihany satria tokony ho novorian’ny CENI avokoa aloha ireo olona efa nilaza fa ho kandida amin’izao fifidianana filoham-pirenena izao. Nandritra izany no nanomezana alalana ireo kandida ireo samy hanao ny fampahafantarana ny vina entiny mampandroso ny firenena raha toa ka lany izy ireny. Efa nahavita nitety faritra maro mantsy ankehitriny ity mpitarika ny Mapar ity vao nitondra izay fanazavana izany ny avy ao amin’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena mikarakara ny fifidianana. Tranga izay miendrika ho fanomezana tombondahiny ny kandida sasany ihany.
Toa variana loatra tamin’ny fanomanana ara-teknika toa ny fanisana mpifidy, sy ny fitadiavam-bola fotsiny araka izany ny CENI, ka nanadino ny fanazavana ny fombafomba sy ireo fepetra entin’ireo kandida miatrika ny fifidianana. Efa tokony efa ela ny fanomanana ireo kandida amin’ny fiatrehana ity fifidianana ity. Ny antony, dia efa fantatra hatramin’izay ny fotoana hanaovana azy, satria miankina amin’ny fahataperan’ny fe-potoam-piasan’ny filoha izay mitondra. Tokony ho voafaritra araka izany ireo fe-potoana ahafahan’ireo kandida miatrika ireo dingana maro mialohan’ny tena ahatongavana amin’ny latsa-bato fa tsy variana nitazana ny adilahy politika teto amin’ny firenena fotsiny.
Araka ny vaovao voaangona teny anivon’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny Ceni, hanatanteraka fanaraha-maso sy fijerena manokana, na ihany koa fanadihadiana ny lisi-pifidianana ho amin’ny fifidianana Filoham-pirenena eto Madagasikara ny eo anivon’ny ...Tohiny
Fanampiana ireo traboin’ny rivodoza : Fotoana izao hanehoana firaisankina, hoy ny Filoha
Ac felis quis tortor malesuada pretium ellente